26 / 02 / 2019 | RayHaber
Andro: 26 Febroary 2019
Ny ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan Burhanettin Kocamaz, Mersin Transportation, izay hanampy fahitana vaovao momba ny fivoriana Mersin Metro Publicity natao. Ny ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan, Burhanettin Kocamaz dia nanatrika ny fivoriana fampidirana 1 Introduces an'i Mersin Metro, [More ...]
Ny Test Drive dia manomboka amin'ny Tranom-bala Eskisehir Hospital Hospital
Raha toa ka mitohy haingana ny asa ho an'ny tsipika vaovao ampidirina amin'ny fiara fitateram-pitaterana Eskişehir, dia nanomboka ny lalan'ny fitsapana miaraka amin'ny hopitaly Otogar sy Şehir. [More ...]
Fandefasana malalaka avy any IETT mankany amin'ny seranam-piaramanidina Ataturk
Misy tsipika IETT vaovao napetraka tany Istanbul mba hamindra any Yenjerı-Atatürk Airport Metro maimaim-poana. Ho fampitomboana ny kalitaon'ny serivisy ao amin'ny tatitry ny Tale Jeneralin'ny IETT, hampihenana ny fampiasana ireo fiara tsy miankina, hahazoana ny kolontsain'ny fifindrana, Ataköy [More ...]
Mpitantana Foibe vaovao an'ny TCDD no nanao fitsidihana voalohany tany Sivas
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fampiroboroboana Mehmet Cahit Turhan, tale jeneralin'ny TCDD İsa ApaydınAli İhsan Uygun, izay voatendry ho praiminisitra amin'ny toerany, dia nanao fitsidihana voalohany tany Sivas. Ny fitaterana sy [More ...]
Fiantohana Passenger amin'ny High Speed ​​Train
Ny solombavambahoaka CHP Deniz Yavuzyılmaz, Ankara, 9 dia nodimandry tamin'ny olona iray nangataka ny hahazoany antoka amin'ny tondroin'ny YHT taorian'ny loza. Ny Ministeran'ny Fitaterana dia nanambara fa ny sandan'ny 1.5 + VAT an'ny mpandeha tsirairay. Sözcüan'i Deniz Ayhan [More ...]
Ny fitsidihan'i Sivas MÜSİAD an'i TÜDEMSAŞ
Nitsidika ny TUDEMSAS ny filoham-pirenena tsy miankina sy ny mpandraharaha (MUSIAD) ny filohan'ny sampana Sivas Salim Eminoglu sy ny mpikambana ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina. Ny filoha Eminoğlu, izay nitsidika ny TÜDEMSAŞ Tale jeneraly Mehmet Başoğlu tao amin'ny biraony sy [More ...]
Ny Metropolitan Ankara dia manasarotra ny asa fanamboaran-trano
Ny fivondronan'ny Ankara Metropolitan Ankara dia mitohy ny maha-paompy azy ary miasa manerana ny renivohitra. Kaominikan'ny Metropolitan, Departemantan'ny Siansa, renivohitra amin'ny ririnina mba hiantoka ny fiarovana ny fiara sy hisorohana ny fihenan-tsakafo [More ...]
Voantso hanokatra amin'ny volana Martsa Halkalı-Mba marika marmaray andalana mariazy 43, nanomboka nandeha ny lamasinina Marmaray. Marmaray, izay hanamaivana ny fifamoivoizana Istanbul, dia tapitra izao ankehitriny. Nikasa ny hisokatra ny volana martsa daholo [More ...]
'Stylish' manokatra ny fampirantiana malaza Uludağ
Ny fampirantiana tantara malaza momba ny Uludağ, izay naseho an'ireo naman'ny tranombakoka tao amin'ny efitrano fampirantiana ao amin'ny City Museum, dia nahasarika ny saina tokoa tamin'ny andro voalohany. 16 an'ny Museum Museum. nomanin'ny mpanakanto İlhan Özer [More ...]
Ny fiovana dia mitohy ao Ordu Zübeyde Hanım Street
Ny Distrikan'ny Metropolitan Ordu dia manohy ny dian-tongotra ary ny asa pivarotana any amin'ny faritra maro ao an-tanàna. Ny filoha Engin Tekintaş dia nilaza, beton Concrete plaque, plastite granita anatin'ny faritry ny asa fanavaozana pavement any amin'ny Zübeyde Hanım Street. [More ...]
Ny famindrana ho any amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul dia navily tamin'ny 5 Aprily
Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fiovan'ny programa famindrana tao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul. Hanomboka amin'ny ora 5 aprily 2019 ora 03: Ny 00, ny 7 dia hanomboka amin'ny Aprily 2019 ora 00: 00. Ataturk Airport, 7 aprily at 00.00 nokarakaraina ary [More ...]
Erdoğan: Sivas Ankara Sivas YHT Andranon'ny Yozgat tamin'izany fotoana izany "
Ny filoha Recep Tayyip Erdogan, Kianjan'ny Repoblika Yozgat amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika, dia niresaka tamin'ny olom-pirenena. Nanomboka ny lahateniny i Erdoğan tamin'ny fiarahabana ny vahoaka Yozgat ary nanambara fa ao anaty hafanam-po sy hafaliana hafa i Yozgat ankehitriny. [More ...]
Vidio ny kitapo (TUDEMSAS)
Ny lalambe vaovao dia tonga eo anelanelan'i Tokat sy Turhal
Ny filoha Recep Tayyip Erdoğan dia niresaka tamin'ny olom-pirenena tamin'ny fihetsiketsehana teo anoloan'ny Stadium Gaziosmanpaşa any Tokat. Nanomboka ny kabariny i Erdoğan tamin'ny alàlan'ny fiarahabana ny Tokats ary niteny hoe: ğı Nanomboka ny asa fanamboarana lalamby vaovao eo anelanelan'i Tokat sy Turhal [More ...]
Ny fivondronan'i Sakarya Metropolitan sy SESOB amin'ny fiaraha-miasa amin'ny City Public Transport Bus Vocational Qualification Certificate dia mitohy. Hoy i Pistil, ı Ho fanampin'ireo fiara fitaterana vaovao izay vao avy nampidirina tao anaty sambo fitaterana anay. [More ...]
Fiaraha-miasa goavana ho an'ny hoavy azo antoka
Ny fihaonana an-tampon'ny tanàna dia nihaona tamin'ny lanjan'ny protocol izay nosoniavina teo anelanelan'ny Kaominina Metropolitan sy ny Direction Security an'ny Providence mba hanomezana tolotra am-pahombiazana ny serivisy fiarovana any Bursa. Avy amin'ny fitaterana mankany amin'ny foto-drafitrasa, manomboka amin'ny fanatanjahantena ka hatramin'ny lovan'ny tantara [More ...]
Uygun, Ankara-Sivas YHT Andalana ho amin'ny fanatanterahana ny asa
Ny Tale Jeneralin'ny TCDD Ali İhsan Uygun dia nanao fanadihadiana mikasika ny Line Yara Ankara-Sivas, izay eo am-pamolavolana azy izao. Uygun dia nahazo fampahalalana avy amin'ny olona mifandraika mandritra ny fanadihadiana azy ireo, ary manamafy ny maha-zava-dehibe ny Ankara-Sivas High Speed ​​Line ary nilaza hoe: [More ...]
Androany amin'ny tantara: 26 February 1913 Osmanlı
Androany ao amin'ny Tantara 26 Febroary 1913 France, izay tsy mahazo aina amin'ny lalamby Ottoman Empire tany Syria sy Palestine, dia nangataka ny hijanonana ny lalamby ho takalon'ny trosa homeny an'i Cavid Bey, izay mankany Paris ho famatsiana trosa. [More ...]